अमला खानुका अचुक फाइदाहरु जानीराखौं ! – AB Sansar
अमला खानुका अचुक फाइदाहरु जानीराखौं !
November 25, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on अमला खानुका अचुक फाइदाहरु जानीराखौं !
अमला खानु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । अमलामा औषधीय गुण भएकै कारण आयुर्वेदिक औषधिमा अमलाको अधिक प्रयोग भएको पाइन्छ । अमलालाई कुटेर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्न तथा टुक्रनबाट रोक्छ । कपाल बाक्लो, कालो र चम्किलो बनाउँछ । अमलाको जुसमा थोरै मह मिसाएर पिउँदा आखाँको ज्योती बढ्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अमला खानु आँखाका लागि निकै स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ । यसको नियमित सेवनले रतन्धो रोग हुनबाट जोगाउने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अमलामा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स लगायतका विभिन्न पोषक तत्वहरू हुन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ । नियमित रूपमा अमला खाँदा यसले शरीरको सेल बढाउँछ र स्फूर्ति दिन्छ । अमलाले रक्तसन्चालन गराउनुका साथै मुटु सम्बन्धि रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ । डाइबेटिजका बिरामीका लागि पनि अमला निकै लाभदायक मानिन्छ ।
यसले मेटाबोलिजम बढाउनुका साथै शरीरमा तागत दिन्छ । अमलामा पाइने फाइबरले पाचन प्रणालीलाइ मजबुद बनाउछ । अमलामा पानीको मात्रा हुनाले पिसाब सम्बन्धि समस्या पनि हटेर जान्छ । त्यस्तै, अमलाले चाउरीपना हटाउने समेत काम गर्छ ।